ပြင်သစ်ရဲတိုက်များ၏လမ်းကြောင်း၊ Loire ချိုင့်ဝှမ်း၏အံ့ဖွယ်ရာများ | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ခရီးသွားနေရာများ, Getaways ဥရောပ, ခရီးသွား
ပြင်သစ်ရဲတိုက်များ၏လမ်းကြောင်းသည်သမိုင်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံများကိုကြိုက်နှစ်သက်သူတိုင်းသူတို့၏ဘဝတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရမည်။ အဖြစ်လူသိများ Loire ရဲတိုက်များမှတဆင့်ဖြတ်သန်းပါ အထူးသဖြင့် Sully-sur-Loire နှင့် Chalonnes-sur-Loire တို့၏မြို့များအကြားကီလိုမီတာ ၃၀၀ နှင့် ၂၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်၎င်းမြစ်၏မြစ်များကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ဤmarရိယာသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရဲတိုက်ဒါဇင်များစွာရှိသည်။
အကယ်၍ သင်လည်ပတ်လိုလျှင်၎င်းကိုတောင်ဘက်တွင်တွေ့လိမ့်မည် ပဲရစ် ငါတို့သည်သင်တို့ကိုလှပသောအဆောက်အ ဦး အချို့ကိုပြသသွားကြသည်။ ၎င်းတို့ကိုအလယ်ခေတ်အလယ်ပိုင်းမှခေတ်ဆန်းအထိတည်ဆောက်ခဲ့ကြပြီးပြင်သစ်ဘုရင်များစွာအတွက်ရံဖန်ရံခါနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ လတ်တလောသူတို့သည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအလွန်ကောင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။ ဤအကြောင်းအလုံးစုံကြောင့်လမ်းကြောင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ယူနက်စကိုက။ ငါတို့ခရီးစတင်ကြစို့။
1 Loire ချိုင့်၏အထိမ်းအမှတ်ရဲတိုက်များ
1.1 Sully-sur-Loire ၏ရဲတိုက်
1.2 Chambord ရဲတိုက်
1.3 Blois ၏ရဲတိုက်
1.4 Amboise ရဲတိုက်
1.5 Villandry ရဲတိုက်
1.6 Saumur ၏ရဲတိုက်
2 Loire ချိုင့်၏ gastronomy
3 Loire ချိုင့်ကိုစူးစမ်းလေ့လာနည်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် Sully-sur Loire လမ်းကြောင်းမှ စတင်၍ ပြင်သစ်ရဲတိုက်များ၏လမ်းကြောင်းကိုစတင်မည်။ သို့သျောလညျး, လမ်းကြောင်းထပ်မံတိုးချဲ့နှင့်အဖြစ်ဝေးသွားနိုင်ပါတယ် Saint Brisson, ပထမ ဦး ဆုံးမြို့၏အရှေ့တောင်ဘက်နှင့်လည်းလှပသောခံတပ်ရှိပါတယ်။
၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးကို ၁၈ ရာစုအထိတိုးချဲ့ခဲ့သော်လည်းဘုရင် Felipe II ၏အမိန့်ဖြင့် ၁၂၁၈ တွင်စတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်ထိုနေရာသို့သင်လည်ပတ်ပါကမြို့ပတ်ရထားမျှော်စင်လေးခုနှင့်၎င်း၏တောင်ပိုင်းတွင်နောက်ထပ်နှစ်ခုပါသောစတုဂံပုံသဏ္ဌာန်အဆောက်အအုံကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုနည်းတူစွာ၎င်းကိုဥယျာဉ်တစ်ခုကဝန်းရံထားပြီးသွားလာရန်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်း၏သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်၎င်းတွင်ထင်ရှားသောဒုက္ခသည်နှစ်ယောက်ရှိသည်။ ရှငျဘုရငျလူးဝစ် XIV 1652 ခုနှစ်နှင့်စာရေးဆရာ ဗော်တဲယား 1715 en ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ပိုကြီးတဲ့ ပြင်သစ်ရဲတိုက်၏လမ်းကြောင်းကိုတက်သောသူအပေါင်းတို့သည်။ ၎င်းကို ၁၆ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး Canon များကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ခဲ့သည် Gallic Renaissanceအလှည့်၌အလယ်ခေတ်များ၏ရိုးရာပုံစံများကိုအီတလီဂန္ထဝင်ဝါဒနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒဏ္legာရီတွင်၎င်းင်း၏ဒီဇိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်းဗိသုကာသည် Domenico da Cortona ဖြစ်သည် လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ, သူ့ဘဝ၏နောက်ဆုံးသုံးနှစ်အဘို့အ၌နေထိုင်ခဲ့သူ။
၎င်းတွင်စတုဂံပုံအစီအစဉ်ရှိပြီးအထင်ကြီးလောက်သောမျှော်စင်ရှစ်ခုနှင့်တွဲထားသည်။ ၎င်း၏ဗဟိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်တစ် ဦး လည်းမရှိ နှစ်ဆ helix လှေကား ပန်းပုအလှဆင်ထားသည်။ ၎င်းကိုပြင်သစ်ရှိ Renaissance ၏လက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလားတူပင်စတုရန်းကီလိုမီတာငါးဆယ်ကျော်ရှိသောforestရာမသစ်တောသည်ရဲတိုက်ကိုဝိုင်းရံထားသည်။
၎င်း၏လက်ရှိပုံစံအတွက်ကတည်ဆောက်ရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည် King Louis XII မိမိအတရားရုံးများအတွက်နေထိုင်ရာအဖြစ်။ Renaissance ခေတ်၏အခြားarchကရာဇ်များနောက်သို့လိုက်သောအစဉ်အလာတစ်ခု ထိုနည်းတူစွာပင်သူမထံမသွားမီသူ၏ချာ့ချ်တွင်သူကောင်းချီးခံစားခဲ့ရကြောင်းသင်သိသင့်သည် Arc ၏ဂျုံး Orleans ၏ဝိုင်းထားခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ချီတက်မတိုင်မီ။
ဒီရဲတိုက်တွင်အတောင်သုံးခုရှိသည်။ အသက်အကြီးဆုံးသောနေရာမှာ Louis XII ဟုခေါ်သည့်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်ပြီး Gothic style ၏အံ့ဖွယ်အဆောက်အ ဦး ဖြစ်သည်။ Francisco I နှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်အီတလီပုံစံနှင့်တုံ့ပြန်သည်။ Gastón de Orleans ၏ရှေးဟောင်းဂရိဗိသုကာ၏ Ionic, Doric နှင့် Corinthian အမိန့်များပါ ၀ င်သည်။
၎င်းသည် Tours ၏အရှေ့ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်း၏မူလရင်းမြစ်မှာနောက်မှဖြစ်သည် ပုံမှန်က XNUMX ရာစု၌၎င်း၏လက်ရှိအသွင်အပြင်ကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်။ ကွဲပြားခြားနားသောအတောင်ပံကိုလည်းပေါ်မှာခွဲခြားထားပါသည်။ အရေးအပါဆုံးမှာချားလ်စ် (၈)၊ နှောင်းပိုင်း Gothic ပုံစံနှင့်လူးဝစ် XII တို့၏ဖြစ်ကြသည်၊ ထို Renaissance ၏ Canon များကိုတုံ့ပြန်သည်။
El ဘုရင်ဖရန့်စစ် ၁ သူသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကလီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီ၏သင်္ချိုင်းဂူတွင်နေထိုင်သည်။ ဒါကိုတွေ့လိမ့်မယ် စိန့် Hubert ၏ Chapel, ရဲတိုက်မှသိမ်းပိုက်အဆောက်အ ဦး ။ အပြင်ဘက်တွင် Loire ၏ဘဏ်မှဗဟိုရင်ပြင်သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ဖုံးလွှမ်းထားသောချဉ်းကပ်လမ်းများပါသောcolရာမမျှော်စင်နှစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်သစ်ရဲတိုက်များကို Villandry မှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ခြင်း, 1536 ခုနှစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် ခေတ်ဆန်းစတိုင်နောက်ဆုံးနန်းတော် အရာ Loire ချိုင့်၌တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ယခင်ကထိုနေရာ၌မျှော်စင်တစ်ခုတည်ရှိပြီးခံတပ်တစ်ခုတည်ရှိသည် ဖိလိပ္ပု II ပြင်သစ်နိုင်ငံမှဗြိတိသျှတို့နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ရစ်ချတ်ဟာ Lionheart.
အကယ်၍ ရဲတိုက်၏မြင်ကွင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းမည်ဆိုလျှင်သင်လမ်းလျှောက်လျှင် ပို၍ ပင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည် ဥယျာဉ်များ။ ၎င်းတို့သည်hugeရာမareaရိယာတွင်ကျယ်ပြန့်သောလှေကားထစ်လေးခုပါ ၀ င်သည်။ တစ်ခုစီတွင်ဥယျာဉ်ခွဲများစွာတည်ရှိသည်။
၁၀ ရာစုခံတပ်တည်ရှိရာနေရာတွင်တည်ရှိပြီးလက်ရှိနှစ်ပေါင်းနှစ်ရာခန့်အကြာတွင်အမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည် Enrique က de Plantagenetအင်္ဂလန်ဘုရင်ဖြစ်သော်လည်းဗြိတိန်နိုင်ငံ၏သခင်လည်းဖြစ်သည်။
၁၃ ရာစုတွင်၎င်းကိုနံရံများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမျှော်စင်လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောခမ်းနားသောခံတပ်တစ်ခုဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ဒါ့အပြင်တာဝါတိုင်လေးခုကသူ့ရဲ့အဓိကကိုယ်ထည်ကိုဝိုင်းရံထားသည် နှင့်၎င်း၏ဝင်ပေါက်တစ်ခုမှတစ် ဦး အံ့မခန်းသောကျောက်လှေကားမှတဆင့်ဝင်ရောက်သည်။ ဒီရဲတိုက်ကိုလည်ပတ်မယ်ဆိုရင်မင်းဟာနတ်သမီးပုံပြင်ထဲမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ရလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်သည် Saumur တွင်ရှိပြီးစစ်ရေးအကြောင်းအရာများကြိုက်နှစ်သက်ပါကထိုအခွင့်အလမ်းကိုသင်ရယူနိုင်သည် သံချပ်ကာပြတိုက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရေးအပါဆုံးတိုင်ကီနမူနာများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Loire ချိုင့်၏ gastronomy
ဤဒေသကိုအဖြစ်လူသိများသည် "ပြင်သစ်ဥယျာဉ်" အံ့ဖွယ်အသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များထုတ်လုပ်သောကျယ်ပြန့်သည့်စိုက်ပျိုးရေးတိုးချဲ့မှုများအတွက်။ Curé Nantais သို့မဟုတ် Olivet Centréကဲ့သို့သောဒိန်ခဲများ၊ ငါးရှဥ့်သို့မဟုတ် Lamprey စသည့်အသားများနှင့်ငါးများသည်လည်းထူးခြားသော gastronomic ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ထိုဒေသတွင်ထင်ရှားကြသည်။
Loire ချိုင့်ဝှမ်းတွင်သင်ကြိုးစားရမည့်ပုံမှန်ဟင်းလျာများမှာ ရွှေဝါရောင်ကညွတ်မုန့်; အဆိုပါ ကင် walleyeဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်အပါအ ၀ င်၊ Beurre Blanc ငံပြာရည် (အဖြူရောင်ထောပတ်) နှင့် cagarrias နှင့်အတူ Touraine ကြက် အဖြူရောင်ဝိုင်မှ (အများကြီးတန်ဖိုးထားမှိုအမျိုးအစား) ။
အချိုပွဲသည်အရသာ ကိတ်မုန့် Nantesကြက်ဥ၊ ဂျုံမှုန့်၊ ဗာဒံသီး၊ သကြားနှင့်မှောင်မိုက်ရမ်၊ က Tarte Tatin သို့မဟုတ်ပန်းသီးနှင့် Anjou Plum ကိတ်မုန့်ဒီအသီးနှင့်ပြည့်စုံတစ်မုန့်စိမ်း။
ပြီးတော့မင်းရဲ့ထမင်းချက်ပြီးအောင်ဒီချိုင့်ဝှမ်းရဲ့ပုံမှန်အရက်များနှင့်စိတ်ဓာတ်အချို့ကိုမြည်းစမ်းနိုင်သည် Cointreauလိမ္မော်ခွံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော က Menthe-Pastille, ပူစီနံ, ဒါမှမဟုတ်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏ သစ်တော်သစ်သား.
Loire ချိုင့်ဝှမ်းကိုကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းသည်လိုက်လျှောက်ရန်ဖြစ်သည် A85 ကားလမ်းရဲတိုက်အချို့ကိုတွေ့ရသော်လည်းသင်လမ်းလွှဲရလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်လည်းရွေးချယ်နိုင်သည် ရထားလမ်း, throughရိယာမှတဆင့်ပြေးသောလိုင်းရှိကတည်းက။ သင်ပင်နှင့်အတူအဆုံးစွန်သောပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ် စက်ဘီး၎င်းကိုယာဉ်တန်းများသို့သင်တင်ပို့နိုင်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ပြင်သစ်ရဲတိုက်များမှတဆင့်လမ်းကြောင်းသည်အမှန်ပင်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ၏အလယ်ခေတ်နှင့် Renaissance အတိတ်တွင်သင်နှစ်ခြင်းခံလိုပါကထုပ်ပိုးပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » ပြင်သစ်ရဲတိုက်များ၏လမ်းကြောင်း